搜索 dabbī 的结果：
[ဒု+ဗ+ဤ။ ဓာန်၊ဋီ။၄၅၈။ ဒရ+ဗိ။ ဒရ+ငီ။ ဏွာဒိ။ ၁၂၃။ （ဒဝဝေ=ဒဝဓေ-သံ）]
DABBI：[f] cái muỗng，cái vá
（၁） ယောက် 'ယောင်း'မ။ （၂） ယောက်ချို၊ စွန်း 'ဇွန်း' （ကော်-ခပ်-မွှေ-စရာ）၊ （က） ဟင်း- မွှေ- ခပ်- လောင်း - သော - ဇွန်း - ယောက်မ။ （ခ） （ရသေ့ပရိက္ခရာ အပါအဝင်ဖြစ်သော） ယဇ်စာ-ခပ်-လောင်း-သော-ဇွန်း-ယေက်မ။ （၃） ယောက်မ-ရွက်-ပြား။ （၄） ယောက်မ-ဇွန်း-နှင့်တူသော （ငှက်နှုတ်သီး၊ မြွေပါးပျဉ်း စသည်၊）။ （ယောက်မ၊ ဇွန်း၊ မြွေပါးပျဉ်း။ P.S.D.）။ ဒဗ္ဗိဂတိက-ကြည့်။ ဒဗ္ဗိဂါဟ-လည်းကြည့်။ ဒဗ္ဗိပဒရ，ဒဗ္ဗိမုခဒွိဇ-တို့ကြည့်။ မူရင်းကြည့်ပါ။
dabbī：f．[Sk．darvī] 匙，杓子．-gāha （為了施與）杓子的持者（holdingaspoon for the purposes of offering）．-homa 匙的獻供.
dabbī：f．[Sk．darvī] さじ，杓子．-gāha 杓子の持者．-homa さじの献供.
dabbī：[f.]aspoon； ladle.
Dabbī，（f.） [Sk．darvī=*dāru-ī made of wood，see dāru]a（wooden） spoon，a ladle； （met.） the hood ofasnake （dabbimattā，phaṇapuṭakā DhA.IV，132）．-- Dh.64； Gen．& instr，davyā J.III，218； Miln.365．-- In cpds．dabbi°.
--kaṇṇa the tip of the ladle DhA.I，371； --gāha holdingaspoon，viz．for the purposes of offering M.II，157 （ofapriest）； Pv.II，953 （=kaṭacchu-gāhika PvA.135）； --mukhaakind of bird J.VI，540 （=āṭa）； --homaaspoonoblation D.I，9．（Page 314）
（၁） ယောက် 'ယောင်း'မ။ （၂） ယောက်ချို၊ စွန်း 'ဇွန်း' （ကော-ခပ်-မွှေ-စရာ）။ （က） ဟင်း- မွှေ- ခပ်- လောင်း - သော - ဇွန်း - ယောက်မ။ （ခ） （ရသေ့ပရိက္ခရာ အပါအဝင်ဖြစ်သော） ယဇ်စာ-ခပ်-လောင်း-သော-ဇွန်း-ယေက်မ။ （၃） ယောက်မ-ရွက်-ပြား။ （၄） ယောက်မ-ဇွန်း-နှင့်တူသော （ငှက်နှုတ်သီး၊ မြွေပါးပျဉ်း စသည်၊）။ （ယောက်မ၊ ဇွန်း၊ မြွေပါးပျဉ်း၊ （P.S.D.）။ ဒဗ္ဗိဂတိက-ကြည့်။ ဒဗ္ဗိဂါဟ-လည်းကြည့်။ ဒဗ္ဗိပဒရ，ဒဗ္ဗိမုခဒွိဇ-တို့ကြည့်။ မူရင်းကြည့်ပါ။
ယောက်မ။ ဟင်းမွှေယောက်မ။ ဆေးရွှေပင်။
dābbī：Name ofaplant
ဆေးရွှေပင်၊ နနွင်းနွယ်ပင်။ နွားလျှာနွယ်ပင်၊ ထောမ။ မြွေပါးပျဉ်၊ P.S.D.။
与 dabbī 相似的巴利词：